Somaliland: Beelo kala qaatay MAGTA laba ka mid ahaa Saraakiisha Ciidammada Qaranka oo lagu dilay Qori-lugud Sannadkii 2014 - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Beelo kala qaatay MAGTA laba ka mid ahaa Saraakiisha Ciidammada Qaranka...
Beesha Gacan ku dhiigluhu ka dhashay oo bixisay 300 Geel ah.
Waxa si rasmiya heshiis looga gaadhay Dilka labadii Sarkaal ee ka midka ahaa Ciidammada Qaranka ee Sannadkii 2014 lagu dilay Magaalada Qori-lugud ee Gobolka Buuhoodle ee Somaliland.
Abbaanduulihii Guutada 17-aad ee Ciidammada Qaranka Maxamed Yuusuf Aw-rabaax iyo Xidigle Jaamac Bidaar oo Guutadaa ka tirsanaa, oo 17-ka bishii September ee Sannadkii 2014-kii uu Askari ka tirsanaa Ciidammada Qaranku ku toogtay Fadhiisinta Guutadaasi ku leedahay Duleedka Degmada Qori-lugud, ayaa waxa Dilkooda heshiis ka gaadhay Beelaha ays ka soo jeedeen labada Sarkaal ee Geeriyooday iyo Beesha uu ka dhashay Gacan ku-dhiiglaha Dilka geystay.
Dilkan labadan Sarkaal oo Dadweynaha Somaliland aad uga xumaadeen, ayaa waxa Beesha Askariga Dilka geystay Shalay labada Beelood ee kale ku Wareejisay 300 Neef oo Geel ah oo ah Magta labadaa Sarkaal oo mid walba lagu heshiiyey in laga bixiyo 150 Neef oo Geel ah.
Chief Caaqil Baashe Jaamac Faarax (Gura-yare) oo ah Caaqilka Gacanta ku hayey isku dubba-ridka Magta Saraakiishan oo Shalay ka hadlayey Madasha uu ku wareejiyey Diyada, ayaa yidhi,
“Anigoo ah Caaqilkii bixinayey Diyada (Magta) waxaan halkan ku bixiyey 300 oo Halaad oo ahaa Diyada labadii Nin oo midkiiba heshiisku ahaa 150 Halaad oo Geel ah, Saddexdii Boqolba meeshan ayay taagan yihiin oo way iga dhan yihiin.”
Chief Caaqilka oo hadalkiisa sii wata, ayaa u Mahad-naqay Odayaasha Beelaha ay ka dhasheen Saraakiisha la dilay, isagoo sidoo kalena Codsaday in Xorriyaddooda loo soo celiyo Dad u xidhan Kiiskan,
“Aad baan ugu Mahad-naqayaa Sida Wanaagsan ee aad nooga guddoonteen Magta labadaa Sarkaal (Alle ha u naxariistee). Waxaanu Dawladda ka codsanaynaa in Raggii u xidhnaa Arrintan (Labadii Sarkaal ee lagu dilay Qori-lugud) in la noo soo daayo, maaddaama oo Beelihii heshiiyeen oo Magtiina la kala qaatay oo aan waxba la isku lahayn.”ayuu yidhi.
Odayaasha ka socday Beelaha labada Sarkaal ee Magtan la wareegay, ayaa iyaguna sheegay in arrintaasi laga heshiiyey, sidaa daraadeedna Dadka xidhan aanay iyaga u xidhnayn, “Waxaanu halkan ka caddeynaynaa inaanu si Gobanimo leh u kala ambo-baxnay, sidaa daraadeed, haddii arrinkii laga heshiiyey Annaga nooma xidhna Ragga kiiskan u xidhani.”ayuu yidhi, mid ka mid ah Odayaasha Diyada Guddoomay.
Dilalka Saraakiisha Ciidamadda
Somaliland Oo Ku Tuntuunsatay Laba Tallaabo Oo Taabo-gelinaya Qaranimadeeda
Somaliland: Aqlabiyadda Taageerayaasha WADDANI Ee Somaliland Iyo Gaar Ahaan Gobolada Awdal /Salal Oo Taageeray Musharraxnimada Axmed Muumin Seed
Somaliland: “Maalin Walba Waad Dagaalamaysaan Oo Nabad-Galyo Xumo Ayaa Jirta…” Guddoomiyaha Golaha Guurtida Oo Walaac Xooggan Ka Muujiyay Xaaladda Gobolada Bariga Somaliland